छानादेखि खानासम्म उल्टो ! यो कस्तो अनौठो घर ? (हेर्नुहोस् फोटोफिचर) - Nepali Virals
१५ फाल्गुन २०७२, शनिबार १३:२२	1,926 पटक-पढिएको
बिश्वमा अनेक प्रकारका घर तथा अपार्टमेन्टहरु छन् । पर्यटकलाई आकर्षणका लागि होस् अथवा बस्नकै लागि किन नहोस । मान्छेहरु सकभर बलियो र आकर्षक घर बनाउने गर्छन । घरको डिजाइनदेखि बास्तुमा समेत ठूलो रकम खर्च गरेका हुन्छन । तर यहाँ हामी एउटा यस्तो घरको कुरा गर्दै छौ जुन बिल्कुलै अनौठो खालको छ । अहिले विश्वका पर्यटकहरुका लागि यो घर आकर्षणको केन्द्र बनेको छ जुन घरको हरेक सामग्री उल्टो छ । छाना, भर्याङ् देखि त्यहा भित्र राखिएका टेबल कुर्सी र खानेकुरा समेत उल्टो राखिएको छ । अहिले बिश्वभरका मिडियामा यो घरको समाचार, तस्बिर र भिडियो भाइरल बनिरहेको छ ।
ताईवानको हुआसान क्रियटिभ पार्कमा इन्जिनियरको एउटा समुहले उल्टो पुल्टो घर बनाएर पर्यटकलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । घरलाई पूर्णरुपमा उल्टो बनाइएको छ । घरको बाहिरि स्वरुपदेखि लिएर भित्रको हरेक चीजले त्यहाँ घुम्ने जाने प्रयटकलाई उल्टो घरमा आएको महसुस गराउदछ ।
त्यस्तै त्यहाँ घुम्न जाने प्रयटकले छतमा उल्टो झुन्डिएको महसुस गर्दछन । घरको छत् जमिनमा झुन्डिएको छ भने घरको जग सिलिंग बनेको छ । घर भित्र भएका समानहरु पनि यस्तो ढंगबाट सजावट गरिएको छ कि त्यहाँ भएका हरेक सामान उल्टो भएको महसुस हुने गर्दछ ।
त्यहाँ घुम्न जाने प्रयटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । त्यसैगरि त्यहाँ घुम्न जाने जो कोहिले पनि आफुलाई फरक संसारमा आएको महसुस गर्दछन । उक्त घरको तयार गर्दै करिब ७ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै घरको क्षेत्रफल ३०० बर्गमिटर रहेको छ। पर्यटकले २२ जुलाईसम्म मात्र यो घरमा घुम्न जान पाउने भएका छन् ।
अघिल्लो इतिहासकै सबैभन्दा क्रुर १० शासक
पछिल्लो प्रेमलाई मलजल गरी हुर्काउने १० तरिका